Iinqwelo moya zaseTurkey kunye nePegasus Airlines zokumiselwa kweenqwelo moya ezicwangcisiweyo zaseKazakhstan
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelo moya zaseTurkey kunye nePegasus Airlines zokumiselwa kweenqwelo moya ezicwangcisiweyo zaseKazakhstan
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKazakhstan • iindaba • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseTurkey zokuPhula • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelomoya ezimbini zaseTurkey zisungula inkonzo yomoya ecwangcisiweyo eKazakhstan.
Iinqwelomoya zaseTurkey zizoqhuba iinqwelomoya ezintsha kwindlela iTurkestan-Istanbul-Turkesta
I-Pegasus Airlines iza kuphinda iqhubeke ngeenqwelo moya phakathi kweShymkent neIstanbul
Inqwelo moya yeBoeing 737 kunye neAirbus A320 eza kusetyenziswa kwiindlela zaseKazakhstan
Icandelo loMphathiswa Wezamashishini noPhuhliso lweZiseko zibhengeze ukuba iinqwelomoya ezimbini zaseTurkey zisungula inkonzo yomoya ecwangcisiweyo eKazakhstan.
Airlines Turkish Ukuqhuba iinqwelomoya ezintsha kwindlela iTurkestan-Istanbul-Turkestan ukuqala ngoMeyi 22, 2021. Ekuqaleni, iinqwelomoya ziya kuqhutywa kube kanye ngeveki kusetyenziswa iAirbus А321neo.
Pegasus Airlines Ndiza kuphinda ndiqhubeke ngenqwelomoya phakathi kweShymkent kunye neIstanbul ezibaleka kanye ngeveki zisebenzisa inqwelomoya iBoeing 737 ngoMeyi 23, 2021.
Iinqwelomoya zaseTurkey yindiza yenqwelomoya yenqwelomoya yelizwe laseTurkey. Isebenza ngeenkonzo ezicwangcisiweyo kwiindawo ezingama-315 eYurophu, eAsia, eAfrika naseMelika, isenza ukuba ibe ngowona mthwalo uphambili emhlabeni ngenani labakhweli.
I-Pegasus Airlines sisiphatho sexabiso eliphantsi eTurkey esizinze kwindawo yaseKurtkoy ePendik, eIstanbul ngeziseko kwizikhululo zeenqwelomoya ezininzi zaseTurkey.
Iinqwelomoya zaseKazakhstan Pegasus Airlines Airlines Turkish